WARARKII ugu dambeeyey Xaaladda Jiidaha Dagaalka ee G Sool – Puntlandtimes
WARARKII ugu dambeeyey Xaaladda Jiidaha Dagaalka ee G Sool
LAASCAANOOD(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya Jiidaha dagaalka ee ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegaya in ilaa maanta marar badan lamaqlayo rasaasta ay dhinacyadu is weydaarsanayaan, gaar ahaana hubka culus, waxaana la xaqiijiyey in khasaare uu kasoo gaaray dhinaca Somaliland.
Wararku waxay sheegayaan in rasaasta culus ee ay dhinacyadu is weydaarsanayaan cabsi laga qabo in ay isku rogto dagaal toos ah.
Warar ka madax banaan dhinacayada ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyada muuqdaa ay muujinayaan in labada kooxoodba u diyaarsan yihiin dagaal toos ah.
Sidaas oo kale ficilada ku aadan in dad ay qabsadeen Somaliland ayaa ah mid ay ilaa hadda is weydiinayaan shacabka Puntland, waxaana ficilkaas banaanka soo dhigay fariintii Faysal Cali Waraabe ee ahaa in la beegsado Ardayda iyo ganacsatada u dhashay Puntland ee kusugan Gobalada Awdal iyo Waqooyi Galbeed.
waar hawsha hala bilaabo inta shacabku aad u kacsan yahay hana lajiidho hubkana halaga furto waxaanu sugnaaba waa wagash wagashta iidoor iyo oohinta faysal & muuse
Mujahid janann oogo says:
Iyadoo malintii 15may quwadii iyo saanadiba hargaysa ku dabaal degayso ayaa afar guuto dhaafi weyday adoon waxba la hadhin mise waaba maanta oo 17guuto isdabataalo my advice waa in aad halkaga iska joogto otherwise waydinfashilmi lix iyo labaatan kun oo 25 years training ku jiray baa cidanka qaranka jida tukaraq ku xaadira oo difaacyo isdaba yaalo oo ilaa cisbitaalo furan haysta
Balan baankuqaadnay hadaanu nahay Harti in aanu iidoor kadhigno maamul gobaleed kamida maamul gobaleedyada somalia iidoor sanadkan 2018 ka baa ugu danbaysa faataabaqdiisa waanu ognahay in aad kuwareegaysaan IGAD, & beesha caalamka oo aad kubaryoo tamaysaan hanaladhedhexaadiyo puntland nabad baanu ogalnahay waxaan diyaar unahay in gambadho aanu kunoqo ee hanaladhexgalo wlhi haduu aduunku iskuyimaado in uusan nagakiin reebi karin ee alow yaa idin dhaha inta goorigoortahay iskaga baxa gobalka sool yaaba isgaaray adeer xaarka ceshada waar heedhe masaanbuu iidoorku ufulaysanaa somalidui kale oo dhan baalayaaban waxay kuleeyihiin somalia baa nagu soodhuushay, daaroodbaa nagu siduulay, xamarbaa ciidamo laga keenay, kililka shanaadbaa niyuu police soodiray, ciidamadii balidoogle lagu tababaraybaa dagaalka kujira, jubaland baa ciidan keentay hhhhhh hhhhhh hhhhhh allow alle wax aan dhuuso moodayey baa xaar igu noqdeybay iidoor kamaraysaa